बिरोध ज्ञापनपत्रले एनआरएनएको इतिहासमै खैलाबैला मच्चियो, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
बिरोध ज्ञापनपत्रले एनआरएनएको इतिहासमै खैलाबैला मच्चियो
स्विटजरल्याण्ड । गैर आवासीय नेपाली संघ लक्जम्बर्गले आयोजना गरेको ११ औ युरोप बैठक तथा ९ औ महिला बैठकमा धेरै कमि कमजोरी भएकोले आगामी दिनहरुमा राम्रो र व्यबस्थित बनाउन संघका १७ जना अभियन्ताले सामुहिक बिरोध ज्ञापन पत्र दिएका छन्।
यस्तो छ बिरोध ज्ञापनपत्र
गैर आवासीय नेपाली संघले संसार भरी छरिएर रहेका नेपालीहरुलाई संगठित गरी स्वदेश तथा विदेशमा सबैको हक,हित र अधिकारहरुको निम्ति आवाजको अभियानमा निरन्तर लागी रहेको छ। शुखी र समृद्ध नेपालको निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ स्थापना भएको गैर आवासीय नेपाली संघले १५ औ बशन्त पार गरी सकेको छ । गैर आवासीय नेपाली संघको उद्गम स्थान लन्डन, २००३ मा स्थापाना भएको संघले युरोप क्षेत्रमा रहने सम्पूर्ण गैर आवासीय नेपालीहरुको हक हित आधिकारहरुको पक्षपोषण सहित सामुहिक भेटघाट,शुभकामना,आदानप्रदान गर्ने,सूचना, शिप र कलासाहित्यको अभिवृद्धि गर्न पाउने सुवर्ण अवसरको रुपमा उपयोग गर्ने हेतुले गैर आवासीय नेपाली संघले प्रत्येक बर्ष युरोपमा कार्यरत २७ एनसीसीहरुको साझा कार्यक्रमहरुको रुपमा क्रमिक कुनै एक राष्ट्रमा बैठक गर्दै आएका छौ । गैर आवासीय नेपाली संघ युरोपको गत २९ र ३० जुलाई २०१८ मा लक्जम्बर्गमा १४ बुदे घोषणा पत्र सहित ११औ युरोप बैठक तथा ९औ महिला बैठक सम्पन्न भएको छ।
गैर आवासीय नेपाली संघ लक्जम्बर्गले आयोजना गरेको ११ औ युरोप बैठक तथा ९ औ महिला बैठक धेरै राम्रो प्रबन्ध मिलाएको थियो। युरोपको सानो देश थोरै नेपाली बसोबास रहेको गैर आवासीय नेपालीहरुले विभिन्न देशहरुबाट आएका गैर आवासीय नेपालीहरुलाई गरेको धेरै राम्रो सत्कार र ठुलो सम्मान अथिति देवभवले सधै स्मरण गर्ने छन। गैर आवासीय नेपाली संघ लक्जम्बर्गको सिधा सम्पर्क राज्य सत्ता, स्थानीय तह र नेताहरु र सामाजिक अभिन्यता सम्म सिधा राम्रो सम्पर्क रहेको प्रधानमन्त्रि ज्युको शुभकामना संदेश,मन्त्रि ज्युको सहभागीयता र शहरको मेअरको उपस्थितिले एनआरएनएको उचाई बढेको महशुस भएको छ। आयोजक राष्ट्रको धेरै राम्रो ब्यबस्थापनको साथ सहयोग पाएको ११ औ युरोप बैठक तथा ९ औ महिला बैठक आफैमा अब्यबस्थित भद्रगोल भएर सम्पन्न भएको छ। त्येसैले युरोपका बिभिन्न एनसिसीहरूले आगामी बर्षमा आयोजना गरिने १२औ युरोप बैठक र १०औ महिला बैठक ब्यबस्थित बनाउन आईसीसीको ध्यान आकर्षण गर्दै ११औ युरोप बैठक र ९ औ महिला बैठकमा भएका कमि कमजोरीहरुको निराकरण गर्न यो सामुहिक ज्ञापन पत्र पेश गरेका छौ।
१- प्रस्तुत कार्यक्रमको रुपरेखा बनाउदा समेत एकरुपता नआएको प्रस्तुत कार्यक्रमको तयारीको लागी युरोप क्षेत्रका एनसीसी अध्यक्ष,आईसीसी सदस्य, अफिस ब्यरिअर र पदाधिकारहरुसित बिष्तृत छलफल हुनु पर्ने थियो। छलफलको परिणाम अनुसार सहमतिको आधारमा प्रस्तुत कार्यक्रमको रुपरेखा तयार गर्नु पर्ने सर्वपरी प्रचलन र गैर आवासीय नेपाली संघको परम्परा रहदै आएकोमा ११ औ युरोप बैठक तथा ९ औ महिला बैठक त्येसो हुन नसक्नु दुर्भाग्य भयो। के कति कारणले यस्तो हुन सकेन यस बिषयको बारेमा पुन: छलफलमा प्रवेश गरी दरार भएका बिचारहरुलाई एकै ठाउमा ल्याउने उपाएको खोज निकाल्ने।
२- गैर आवासीय नेपाली संघ गैर राजनितिक संस्था भएको विधानको प्रस्तापनामा उल्लेख गरेको छ तर पनि गत युरोप बैठकमा प्रत्येक्ष नेपालको राजनीतिक रोमेलिएको आभासले संघको छविलाई धमिलाउने कोशिस गरेको महशुस हामी सबैले गरेका छौ। यस बिषयमा आइसीसी सल्लाहकार आदरणीय सुरेन्द्र श्रेष्ठले आफुले अनुभूति गरेका आभास सहितको अभिव्यक्तिले अझ धेरै स्पस्ट पारेको छ। आगामी दिनमा यस्तो प्रवृतिको घटना पुरानावृति नहुन एनसीसी अध्यक्ष, आईसीसी सदस्य र अफिस बेरिअर तथा पदाधिकारीहरुको गोलमेल बृहत छलफलको माग गर्दछौ।
३- गैर आवासीय नेपाली संघमा आगामी पिडिको नेतृत्व र क्षमता तथा ज्ञानको बिकासको लागी नयाँ पुस्तालाई प्रोत्साहन गर्ने भन्ने अमृत वाणी बोल्दै आएको गैर आवासीय नेपाली संघले हरेक बर्ष एकै व्यक्तिलाई कार्यक्रम संचालन गर्ने जिम्मेवारी सुम्पिनुमा गैर आवासीय नेपालीहरुको क्षमता र ज्ञानको बाधक बनिरहेको छ। बिडम्वना कार्यक्रम संचालकले आयोजक देशको नाम सम्म बिर्सिएको थिए। त्येसैले आगामी दिनमा यो जिम्मेवारी पनि नयाँ पुस्ताहरुलाई सुम्पनु पर्ने जोडदार माग राख्दछौ।
४- युरोप क्षेत्रको कार्यक्रम भएकोले कार्यक्रमलाई सफल बनाउन युरोपका एनसीसी अध्यक्ष, आइसीसी सदस्यहरुको सकृय भुमीका सहितको सहभागीयता हुनु पर्ने थियो तर कार्यक्रमलाई आइसीसी महासचिब ज्युको सिधै हस्तक्षेप भएको कारणले भुमिका बिहिन अबस्थामा कार्यक्रममा ताली बजाउने, फोटो खिच्ने, शहरमा घुमफिर तीर ध्यान केन्द्रत भयो। NCC अध्यक्ष र ICC सदस्यहरुलाई बैठकमा केन्दित गर्न सकिएन। केवल अर्थ संकलन र सहभागीयताको संख्यामा बृद्धी गर्ने काम मात्र उपयोग गर्न कोशिस गरीयो। आईसीसी पदाधिकारीहरुलाई क्षेत्रीय बैठकमा सम्मानित अथितिको रुपमा स्वागत गरिनु पर्दछ तर आससीसी महासचिवले क्षेत्रिय समन्वय परिषद्को काम कर्तब्य र अधिकार तथा जिम्मेवारीलाई सिधा हस्तक्षेप गर्नु गैर आवासीय नेपाली संघको बिधान बिपरित हुन आउछ।आगामी दिनहरुमा आईसीसीले हस्तक्षेप नगर्ने प्रतिबद्धताका साथमा ११ औ युरोप बैठक तथा ९ औ बैठकमा गरेका हस्तक्षेपको क्षमा याचना माग्नु पर्ने माग गर्दछौ।
५- आइसीसीले क्षेत्रीय संयोजक उपसंयोजक ज्युको काम,कर्तब्य र जिम्मेवारी के के हुन? निर्धारण गरीदिन हार्दिक अनुरोध पनि गर्दछौ। बर्षको एकपटक क्षेत्रीय बैठक मात्र गर्ने कामलाई पनि आइसीसीको सिधै हस्ताक्षेप गर्ने प्रवृतिलाई निषेद गर्नु पर्ने देखिएकोछ।
७- ११ औ युरोप बैठक र ९ औ महिला बैठकमा युरोप क्षेत्रका एनसीसीहरुको आपसमा बृहत छलफल बहस हुनु पर्ने थियो। तर बर्ष भरिको प्रगती विवरण को लागी,छुट्टाएको ५ मिनेटको समय पनि पुरा गर्न नपाई पटक पटक चिट दिने काम बन्द गरिनु पर्दछ।
८- गैर आवासीय नेपाली संघ एउटा भाई चाराको सामाजिक संस्था भएकोले अग्रज तथा आपसी सम्मान,मान मर्यादा क्रम ( Protocal) अनुसार गर्ने चलन अग्रजले दिएको शिक्षालाई सधै ग्रहण गर्नु पर्दछ। उपाध्यक्ष कुल आचार्यको नाम प्लेट नै सिटबाट हटाएको थियो। उपाध्यक्ष कुल आचार्य ज्यु बोल्दा महासचिब ज्युले गतिरोध उत्पन्न गर्नु शुभानिय होइन। कार्यक्रम संचालकले आईस ( IES) का पदाधिकारीहरु सचिब जानकी गुरुङ र सहकोषाध्यक्ष सोम सापकोटालाई आसन ग्रहण गराउने क्रममा नाम लिन नै भुलेका थिए। धेरै समय पछि मात्र नाम उच्चारण गरेका थिए। माफ माग्न पर्ने थियो तर मागेनन। यो निर्वाचित आईसीसी पदाधिकारीहरु माथि गरेको ठुलो अपमान र अमर्यादा थियो। बिगतका युरोप बैठकको उद्घाटन सत्रमा NCC अधयक्ष र ICC सदस्यहरुलाई आसन ग्रहण
स्वागत गर्ने चलन थियो तर ११ औ युरोप बैठक तथा ९ औ बैठकको उद्घाटन सत्रमा कार्यक्रममा बिभिन्न देशहरुको NCC को नेतृत्व गर्ने NCC अध्यक्ष र आईसीसी सदस्यहरूलाई कार्यक्रम संचालकले नाम उच्चाहरण सम्म गर्न सक्दा अपमानित भएको आभास भएको छ । प्रोटोकलको महत्वहिन तवरले अगाडी जाने यस्तो चलनको बिकासले हाम्रो नयाँ पुस्तालाई NRNA मा कस्तो किसिमको शिक्षा र प्रचलन सिकाउन खोजेका हौ यस बिषयमा समिक्षाको माग गर्दछौ।
९- गैर आवासीय नेपाली संघ युरोप बैठक र महिला बैठक नाम आफैमा विवादित छ। बैठकलाई हामीले ११ बर्ष सम्म परिभाषित गर्न नसक्नु हाम्रो अक्षमतालाई स्विकार्नु पर्दछ। एजेण्डा बिनाको बैठक कहिँ हुनै सक्दैन। बैठकले निर्णय निकाल्छ तर घोषणा पत्र निकाल्दैन। बैठकको निर्णय गर्दा सहमति असमति हुन्छ। बहुमतले पारित गर्ने चलन हुन्छ।बैठकमा सहभागी सबैले हस्ताक्षेर गरेर सहभागी जनाउछन। बन्द सत्रमा गरिने भएकोले बैठक भनिएको हो।यी कारणले ११ औ युरोप बैठक थिएन। यो साधारण बार्षिक भेला थियो। काम अनुसारको नाम परिबर्तन गर्न माग गर्दछौ।
१०- ११ औ युरोप बैठक तथा ९ औ महिला बैठकमा आर्थिक पारादर्षिकता बिषयमा छलफल हुनु पर्छ । कुन पाहुनालाई पुरा खर्च व्यहोर्ने हो। अहिले सम्म छलफल स्पष्टतासित भएको छैन। होटेल खर्च करिव २४ हजार युरो के कसरी खर्च भयो? यसको जानकारी सबै गैर आवासीय नेपालीहरुलाई गराउनु पर्दछ। कुन पाहुना को खर्च कति? कसको विविधवत खर्च ब्येहोर्ने भन्ने छलफलबाट तय हुने बिषय भएकोले पुरै आयव्ययको विवरण संगै छलफल हुनु पर्दछ। बिगतमा भएका युरोप बैठकहरुका हिसावकितावको रकम अझै केन्द्रले प्राप्त नगरेको भनेर बारम्बार NCC हरुलाई ताकेता गरेकाछ । ११ औ युरोप बैठक र ९ औ महिला बैठकमा चन्दा दाताले बोलेर पनि रकम उपलब्ध नगराएका ब्याक्तिहरुको नाम सार्वजनिक गर्नु माग गर्दछौ।
१३- गैर आवासीय नेपाली संघ ११ औ युरोप बैठक र ९ औ महिला बैठक सधै ढिला गरी कार्यक्रमलाई सुरु गर्नाले ९ औ महिला बैठक लाई समय नै पुगेन। गैर आवासीय नेपालीसंघले नारी समानता,स्वतन्त्रता र महिला ससक्तिकरण र महिला जागरणको ठुला बहस गर्ने गर्दछ तर आधा आकास ढाक्ने महिलाहरूलाई गैर आवासीय नेपाली संघले बेवास्ता गरेको देखियो। युबाहरुलाई निरुत्साहिक गरीयो। युबाहरु आक्रोसित भइ कार्यक्रम नै नगरने भनेर बहिरिने क्रममा अर्को हलमा युबाहरु को बैठक सन्चालन गरियो। जसको कारणले पुरुष युबाहरु महिलाहरुको कार्यक्रममा सहभागी हुन सकेनन।महिलाहरूको कार्यक्रममा युबाहरु उपस्थित हुनबाट बन्चित भए। अत:आगामी १२ औ युरोप बैठक र १० महिला बैठकमा महिला तथा युबाहरुको कार्यक्रमको निश्चित मापदण्ड बनाउन माग गर्दछौ।
१५-२७ वटा युरोपका एनसीसीहरुको युरोप बैठक भन्ने कार्यक्रमको नामकरण गरेको ठाउमा हरेक पटक हस्तक्षेप भएको छ। आफ्नोलाई कार्यक्रममा स्थानमा व्यक्तिगत प्रतिसोध,राजनीतिक पूर्वाग्रह, मानसिक दवाव दिने काम गरिएको जलन्त उदाहरण सह सम्योजक एकराज गिरिले माईक छोडेर हिंडे पछी बुझ्न सजिलो भएको छ। यस बिषयमा छानबिनको माग गर्दछौ।
१-बिजय मोक्तान - जर्मनी
५-कुबेर कार्की -पोर्तुगल
८-जिवन जंग कुँवर - अष्ट्रिया